'Angisiye uBen 10, lelo gama lehlisa isithunzi' | isiZulu
I-ANC ingase iqondise izigwegwe odalule imali bayisebenzisile
Johannesburg - Ukubizwa ngo-Ben 10 akugcini ngokucekela phansi isithunzi kodwa kuphinde kutshengise ukwedelela kulabo abasuke bekubiza ngaleli gama.
Lokhu kungokusho kukaLuvo Makasi osolwa ngokuba ngu-Ben 10 kaNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle, uNomvula Mokonyane.
UMakasi ubekhuluma kanje kulandela izinsolo ezenziwa ngumholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema nabephephandaba iCity Press emasontweni ambalwa edlule, ezithi uyisoka elincane likaMokonyane.
OLUNYE UDABA: UMalema ubize umengameli Zuma nge’Blesser’
"Ukubizwa ngoBen 10 akugcini ngokucekela phansi isithunzi kodwa kuphinde kutshengise ukwedelela. Ngingathanda ukuthi ngingaphinde ngizithole ngiphendula lo mbuzo noma ohlobene nalolu daba," kusho uMakasi.
Ngokusho kukaMakasi, lezi zinsolo zisabalale ngesikhathi ifemu yakhe yabameli iBoqwana Burns inikeze iLepelle Water Board izeluleko zomthetho ngomsebenzi iGiyane Water Project.
"Sesinesikhathi seluleka abantu ngemisebenzi eyehlukene, inkinga iqale ngesikhathi sesithinta lo waseGiyani," esho.
Lokhu kuza ngemuva kwencwadi ebhalwe yi-EFF ebithi kunomuntu othile, onobudlelwane noNgqongqoshe, okunguyena onesandla ezinhlelweni ezenziwa uMnyango, ukukhishwa kwamathenda nangendlela okusetshenziswa ngayo izimali; nokuthi uNgqongqoshe unomuzi obiza u-R40 million endaweni yaseSandhust, eGoli.